Guardiola oo shaaca ka qaaday wixii kooxdiisu ka maqnaa kulankii xalay ee Manchester United – Gool FM
(Manchester) 09 Mar 2020. Macalinka kooxda kubadda cagta Manchester City ee Pep Guardiola ayaa sheegay in kooxdiisu ay si wanaagsan ula ciyaartay naadiga ay xafiiltamaan ee Manchester United inkastoo ay guuldarro ka soo gaartay kulankii ay xalay ku wada ciyaareen horyaalka Premier League.
Dhinaca kale Pep Guardiola ayaa si weyn u difaacay goolhaayihiisa reer Brazil ee Ederson, kaddib qaladkii uu xalay ku hor sameeyay xiddigaha Manchester United, wuxuuna ku tilmaamay inuu yahay goolhaye aan caadi ahayn.
Haddaba macalinka reer Spain ee Pep Guardiola ayaa wareysi uu bixiyay ciyaarta kaddib sida caadiga ah wuxuu ku sheegay:
“Waxaan u ciyaarnay si wanaagsan, balse waxaan luminay xoogaa yar hufnaanta dhanka weerarka ah, laakiin qeybta labaad ee ciyaarta waan fiicnaanay, qaab ciyaareedkuna wuu fiicnaa”.
“Ederson waxa uu badbaadiyay hal ama labo fursadood, waa goolhaye aan caadi aheyn, uma imaanin inaan xukumo ciyaartoydeyda, khaladaadku waa qeyb ka mid ah ciyaarta, wuuna soo kabsan doonaa, sababtoo ah waa goolhaaye aan caadi aheyn”.
“Ma dhihi karno waxaan u guuldareysanay maqnaanshaha De Bruyne, dabcan Kevin waa mid aad muhiim u ah, laakiin qof walba waa muhiim”.
“Waxay cadaalad darro u tahay dhamaan ciyaartoyda in maqnaanshiyaha Kevin De Bruyne ay sabab u aheyd guuldarradeena, waan ixtiraamayaa dhamaan ciyaartoyda kooxda waxaanan qabaa inaan qaab wanaagsan ku jirnay.
Weeraryahanka Kooxda Real Madrid ee Karim Benzema oo Xalay barbareeyey Samuel Eto'o
KUN & KOW: Cristiano Ronaldo oo kulankiisii 1,000-aad iyo kulankiisii 1-aad ka hor tagay Kooxda Inter Milan